Ekaterina Larsson - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
Ekaterina Larsson လူများ, အနုပညာ, ရေရှည်တည်တံ့ရေး, start-ups နှင့်နည်းပညာအသစ်စိတ်ဝင်စားမယ့်စာရေးဆရာနှင့်စူးစမ်းရှာဖွေသူဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည် Blagoevgrad, ဘူလ်ဂေးရီးယားပေမယ်နေထိုင်ခဲ့နှင့်အမေရိကန်အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီ, ဗြိတိန်, ဆွစ်ဇာလန်နှင့်အတိတ် 12 နှစ်ပေါင်းထံမှဖြစ်ပါသည် - ဆွီဒင်၌တည်၏။ AUBG ကနေစီးပွားရေးနှင့်စာနယ်ဇင်းများတွင် BA degree ကိုနှင့်ချီကာဂိုကနေစျေးကွက်အတွက်မာစတာဘွဲ့နှင့်အတူလက်နက်ပါ, Ekaterina ကပထမဦးစွာစျေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူများ၏လမ်းကြောင်းကိုယူခဲ့ပါတယ်။ လမ်းဆင်းသူမကပိုပြီးရေးသားဖို့လိုခငျြသလိုခံစားရတယ်နှင့်စျေးကွက်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေးမှအသွင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ငါတို့သည်ဤလောကကိုကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ် - သူမ၏ယုံကြည်ချက်ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ထက်ပိုကြီးတဲ့အယူအဆတခုအားလုံးကိုအလုပ်သင့်ကြောင်းပါ! တစ်ကြိမ်မှာအနည်းငယ်ခြေလှမ်း။ Ekaterina ပထမဦးဆုံးကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR မှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားအကြောင်းတရားများအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်, ပြီးတော့ CSR နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားမပျက်စီးစိတ်ဝင်စားတယ်။ သူမသည် says: "ငါသည်ငါတို့ရှိသမျှသည်, အစားကားကိုယူပြီးတစ်ဦးထက်ပိုသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သတိ way- ဆိုင်ကယ်အတွက်အသက်ရှင်ရန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအားထုတ်မှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့တစ်ခုခုလုပ်ကျွန်တော်တို့ကိုအနီးဂေဟဗေဒစိုက်ပျိုးထုတ်ကုန်ကိုရှေးခယျြ, ဒုတိယလက်ကိုဝယ်မယ့်အစားအားလုံးအသစ်သောအရာကိုဝယ်ယူနိုင်မယုံကြည် အချိန်ကို။ ကုမ္ပဏီများအထူးသဖြင့်ဒီနေ့ခေတ်ရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့မမျှဆင်ခြေရှိသည်။ ဒါဟာအစိုးရများ, န်ထမ်းများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအားဖြင့်သူတို့ထံမှမျှော်လင့်ရသည်! "
Ekaterina သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ running ဖြစ်ပါတယ် - Ekaterina Larsson DigiCom - နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်ကနေကလေးတွေမှဘူဂေးရီးယားဆုံးမဩဝါဒပေး။ သူမ၏အားလပ်ချိန်များတွင်သူမ, ကခုန်ခရီးသွားလာစာအုပ်တွေဖတ်ပါ, ယောဂပြု run, စက်ရုံပန်းပွင့်နှင့်မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းဖို့ချစ်တော်မူ၏။